Android Games APK-Olee otú Download Free Android Games Full Version
Android Games APK - Olee otú Download Free Android Games na Full Version
Otu ngwa faịlụ bụ ihe ị nwere ike nụrụ nke ọ bụrụ na ị nwere otu Android ekwentị; ị nwekwara ike ịbụ na o chere onwe gị ihe ngwa faịlụ bụ kpọmkwem? Ọfọn, ọ dị ezigbo mkpa ka ihe ihe ndị a bụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ bụghị nanị gị ka mma Android ahụmahụ kamakwa download ngwa ọdịnala na e leaked. APK faịlụ ga-ekwe ka ị hazie gị ojiji nke Android egwuregwu site kwe gị ibudata egwuregwu ndị na-adịghị na Play Store.
Ndị na-esonụ ọmụma ga-enye gị ihe echiche nke mere nbudata APK faịlụ aghọwo otú ewu ewu.
N'ihi Gịnị Ka M Chọrọ Wụnye ihe ngwa faịlụ?
Nbudata APK faịlụ mgbe na-achọ ha ga-eme ka i nwee
1. ingress ngwa -ya e leaked tupu ha a tọhapụrụ eze. Ọ bụ ezie na, ọ na-adịghị atụ aro na i nwekwara ike ibudata ngwa ọdịnala na-machibidoro.
2. Leaked APK faịlụ - Android ewuli eme n'ihu nke oge ya mere na-enye n'oge ohere ka atụmatụ nke bụ ihe ọhụrụ na-akpali akpali nke ga-abụ dị ka ọrụ ruo oge ụfọdụ. Otu ihe atụ nke a bụ Android L Mee nke e wepụtara n'oge na ọ bụ ezie na ọ bụghị a tọhapụrụ eze ọ pụrụ ịchọta online.
3. Ọzọ uru nke APK faịlụ - bụ na ha ekwe ka ị uzo ebu, nke i nwee ike inweta ọhụrụ mmelite si Google; ndị a mmelite iyi na-ruo mgbe ebighị ebi na-abata si netwọk gị dị ka ha bụ ihe n'elu-ikuku update.
4. na unu enweghị ike - Nweta Google Play Echekwala site na gị Android ngwaọrụ, mgbe ahụ, APK faịlụ ga-eleghị anya gị nanị nhọrọ mgbe wụnye ngwa jidesie gị ngwaọrụ.
N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị onye ọ bụla bụ ike zere wụnye ihe ngwa faịlụ jidesie ha gam akporo ngwaọrụ, otú ndị na-esonụ bụ nanị ụfọdụ n'ime ihe ndị mere ị nwere ike n'akụkụ Ibu Ibu ihe ngwa.
1. Ọ bụghị ihe niile na gam akporo ngwaọrụ enye Google Play - Ị nwere ike adịghị aghọta ya, ma ọ bụghị ọ bụla emeputa nke Android ngwaọrụ awade Google Play, na Android ahịa adịghị enye ọrụ nke Nokia a nnukwu nhọrọ nke ngwa. Ya mere, iji n'ihi na ị na-egwu dị iche iche egwuregwu na nwere dị iche iche ngwa ọdịnala na ngwaọrụ gị, wụnye APK faịlụ bụ gị nanị nhọrọ.
2. égwu ị chọrọ na-adịghị awa - Google Play adịghị enye gị ụdị ngwa ọdịnala na ị chọrọ n'ime mpaghara gị; n'ógbè ị na-ebi nwere ike machibido ụfọdụ ngwa. Ka ihe atụ ụfọdụ ngwa ọdịnala bụ nanị maka US Market na otú ha nwere ike ghara arụnyere na site Google Play. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe mgbe ahụ ị ga-mkpa n'akụkụ Ibu Ibu ngwa faịlụ jidesie gị ngwaọrụ.
3. Ebe E Si Nweta ma ọ bụ data atụmatụ - Ọ ma eleghị anya na i-agba ọsọ nke n'aka ma ọ bụ na unu enweghị data atụmatụ hapụrụ ruo mgbe ị na-akwụ gị ọzọ ụgwọ, ma ọ bụrụ na nke a bụ ikpe ahụ nbudata APK faịlụ bụ ụzọ ọzọ na nke ị nwere ike iwunye ngwa ma ọ bụ egwuregwu gị Android ngwaọrụ.
The Top 5 Sites maka nbudata Android APK Games
Nke a na saịtị nwere mma Android APK egwuregwu n'ihi na Android ngwaọrụ.
1. Evostar: Kpara Warrior - Nke a na-ewu ewu ohere warrior chọrọ enyemaka-ya ahụmahụ site na galaxy. Ị ga-alụ ọgụ iro na ndị siri ike ma na-eleta dị iche iche na mbara ala. Egwuregwu a nwere ihe na-akpali ibé na ọtụtụ na-etoju. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
2. My Little inyinya: Equestria Girls - Chọta anwansi okpueze nke e zuru a villain, na ahụmahụ ndị na-breathtaking na ọhụrụ schoolgirls bụ ndị ọnụ na-otu agadi akwụkwọ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
3. Earthcore: ile Ihe - E nwere kpara dike kaadị na-anakọta nke na-agụnye mythical e kere eke, oge ochie chi na na. Ọbụna-akụkụ na kaadị duels. Na-amụ dị iche iche nkà na incorporate ha iji dịkwuo gị arụmọrụ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
4. Dragonfall: Ụzọ e si eme - Wuoro onwe gị ihe agha dị ka gị na ìgwè ndị dike, buso obi ọjọọ dragon eze. Ịzụlite gị nkà na zuru ezu dị iche iche aga-eme. Ọzọkwa ibuso ya agha na agha na gị otu na ịzụlite nkà ha dị ka mma. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
5. EVO Creo - Nke a ụwa nwere ọtụtụ dị iche iche nnukwu anụ na e kere eke na-iju ndụ na ya. Mepụta gị otu gbakwunyere TAME na-emeri nnukwu anụ. Ịhụ ọhụrụ ahụmahụ ma na-onwe gị na a ọhụrụ njem nakwa dị ka ịchọta ndị enyi ọhụrụ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
6. Kayle: Njikọ nke Akụkọ Ifo - Kayle bụ otu mmụọ ozi gị ịchịkwa; ọ na-ebibi ndị iro ga-esi na ya ụzọ na a mma-agha nke na-n'inye ntaramahụhụ. Ị nwere ike ịzụta dị iche iche nke munitions site obon na inweta ya. E nwere ọnọdụ dị iche iche i nwere ike iri gị agwa site na. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
7. Ace nke Arenas - Ị na ndị enyi gị nwere ike ime ka a otu na-alụ ọgụ megide ndị ọzọ egwuregwu bụ ndị na na-na ìgwè na si gburugburu ụwa. E nwere ike ịlụ ọgụ iji merie na arena na eme etinyere n'ụzọ kwesịrị ekwesị ga-enyere gị ndikan iro gị. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
8. dragọn Village TGC - anakọta na-eme ka a collection nke kaadị na pụrụ iche na nnukwu anụ na dragons na ndị dị ike. Gị odide nke ị ịchịkwa ga-eme agha dị iche iche na ndị iro. A ike onyenwe bụ ihe mgbaru ọsọ ị nwere ike nweta dị ka ị na-egwu egwuregwu a. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
9. dragọn Ball Z: Dokkan Agha - Lụọ iro gị na ìgwè ndị dike. Coloured ngalaba-egosi na ihuenyo nke ị ga-enweta otú ị pụrụ inweta ike. Egwuregwu a dabeere na a na-ewu ewu Anime usoro na dị nnọọ ka ihe odide ke nsonso ọ bụla n'ime ha nwere ikike na nkà ndị mmadụ ka ọ bụla n'ime ha. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
10. The Quest site Chorrus - Ka ị na-eduzi gị Nwere Obi Ike dike site na ọkwa dị iche iche nke afia na ihe mgbochi i nwere ike imeri nnukwu anụ nke ọbụna gbapụ n'aka ha. Egwuregwu a nwere ọtụtụ ihe odide ịhọrọ site na onye ọ bụla otu n'ime ha na-enwe pụrụ iche na ikike, ngwá agha na klas. The dike ga-aga site ọhịa, dungeons na n'ebe ndị ọzọ dị ka ị na-onwe gị na ihe njem site na nke a egwuregwu. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
Nke a website nwere n'elu free APK fun Android egwuregwu na ngwa ibudata.
1. Nsogbu nke Clans - E nwere Ọzọ jupụtara ọnụma na wizards ndị pyromaniacs, otú ịkpọlite ​​ndị agha gị na-edu gị ka ndị mmadụ na mmeri. Na-ewu gị nnọọ onwe obodo ma na-agbachitere ya si Raiders, ị nwekwara ike agha megide ndị ọzọ Player na-gburugburu ụwa. Mepụta a umunna na dị ike na-ebibi ndị iro clans. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
2. Gunship Agha - Helicopter 3D - Na-akpọ ọzọ nke ọgụ dị ka a helikopta pilot niile gburugburu ụwa. Ị nwere ike ịhọrọ si dị iche iche ofu nku VTOL na rotary ugbo elu, mgbe emecha gị ọzọ. E nwere ụgbọ elu akara ịme anwansị na ndapụta ike ga-enyere ị na-enwe ọgụ nke ga na-ị mikpuru na egwuregwu a. Ịhụ egwuregwu a ebe a.
3. Hill ọrịrị Racing - Bill Newton bụ ihe Uphill racer bụ onye na-eto eto na egwu. Ọ bụ ihe na-aga na njem nke ga-ya ka ebe ọ dịtụbeghị n'ihu. Ya iwu nke Fiziks na-adịghị egosi nkwanye ùgwù na ruo mgbe o dechara ya agbụrụ elu ugwu nke bụ na ọnwa. Ihe ịma aka chere ya ihu na-arịgo gburugburu na-ndị pụrụ iche nke nwere ike na-enweta na-akwọ ụgbọala ọtụtụ dị iche iche ụgbọala. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
4. Hay Day - Nke a ugbo bụ ndị kasị mma gburugburu na egwuregwu a bụ ndị kasị ewu ewu egwuregwu site anya. Agbasaghị anụ ụlọ gị, kụrụ na ahia ngwongwo ị na-eto na ndị enyi na ndị agbata obi. Ị na-akọrọ gị ugbo na quirky ụmụ anụmanụ na ọ bụ ezie na ọ dịghị mgbe Mmiri na-ezo gị kụrụ dịghị anwụ anwụ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
5. Jetpack Joyride - Mkpụrụ ninja kere egwuregwu a. Eyi coolest jetpacks na ofufe site na mbara igwe dị ka Barry Steakfries. Egwuregwu a na-ewe gị na a otu ụzọ njem. Barry etịbede n'ime a nzuzo ụlọ nyocha na okụt niile jetpacks o nwere ike mgbe chọrọ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
6. Plague Inc - Ndidi Zero e oria na ị pathogen. Ị ga-akwụsị ọ bụla n'akụkọ ihe mere eme nke ụmụ mmadụ site na-eweta banyere ọgwụgwụ ha. Imepụta na evolve a na-egbu egbu otiti nke na-aga global, mgbe ị imeghari ihe i nwere ike megide ndi mmadu iji chebe onwe ya. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
7. Agar.io fụchie - egwuregwu a nwere e kere ka unu wee welie ọkpụkpọ ahụmahụ nke Agar.io, egwuregwu a na-nwere Tagpro nke bụ ọtụtụ mgbakwunye gụnyere. A na ngwa na-emekwa ka ọ dịrị ya mfe na-egwu Agar.io. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
8. Criminal Ileba - dozie a usoro ikwa mgbe ị isonyere Grimsborough Police, na nke a zoro ezo ihe njem egwuregwu. Ị ga-enwe ichoputa mpụ idaha, chọta clues, na ahụ na-egosi enwetaghị nke na-egbu na ajụjụ na-enyo enyo. Ị nwere ihe ọ na-ewe na-a tutuntu? Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
9. oku nke ọrụ: Heroes - Ị ga iwu agha nke comprises nke dike, na-agbawa obi drones na J.Randall agha nke si oku nke ọrụ, a na 3D atụmatụ egwuregwu. Zụlite gị pụrụ iche agha otú i nwere ike na-achịkwa onye iro gị agha nke atụmatụ dike nke na-n'ụzọ zuru ezu na-achịkwa gị, e nwere ịtụnanya killstreaks na gị isi bụ customizable. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
10. Summoners Agha: Sky Arena - Nke a edinam juru n'ọnụ fantasy egwuregwu ga-ewere gị agha a ụwa nke na-alụ ọgụ n'elu oké mkpa akụ Mana kristal. Ị ga na-awụlikwa elu n'ime Sky Arena ebe ìgwè ndị nnukwu anụ nwere ike gbakọtaranụ, na-alụ ọgụ iji stratejik Nkea ka mmeri. E nwere ihe karịrị 800 nnukwu anụ n'ihi na ị na ịhọrọ site na. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
Nke a website nwere n'elu HD APK Android egwuregwu ibudata.
1. Asphalt 8: Airbourne - Ị nwere ike ugbu a-egwu egwuregwu a dị ka ọ bụrụ na ị nọ na Arcade mode, ụgbọala dị ka frantically dị ka o kwere niile kasị mma ụgbọala na mbara ala. The ụgbọala nwere ike igosi ịtụnanya stunts ma ikpọ jumps. E nwere agbụrụ na-akụkụ na ihe omume na nakwa na e nwere ihe karịrị 180 ihe na ọrụ mode kwa. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
2. FIFA 14 - Ị nwere ike igwu ọkacha mmasị gị otu na na 33 leagues ịhọrọ site na 16,000 Player, 600 ikikere ìgwè na 34 ndụ n'ezie stadiums. Ị nwere ike ịmepụta kpọmkwem nke gị nrọ otu site na iji Ultimate Team mode. Ịchịkwa niile Player site na-eme taps, na-egosi ha na-eme ikpuru Player na-eme ka ha chebe, agafe ma na gbata mgbaru ọsọ nanị site n'iji mkpịsị aka gị na ihuenyo. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
3. Blood & otuto: Akụkọ Mgbe Ochie - Players nwere na ihu ọ bụla ọzọ na gladiator arena na Rom, na-alụ ọgụ maka gold, ugwu na otuto. Imeri ndị iro gị niile site na-akwadebe gị ngwá agha na-alụ ọgụ iro gị niile ga-abụ eze nke-alụ ọgụ ọnwụ. Egwuregwu a ga-eme ka ị na-eji a ọnụ ọgụgụ nke ngwakọta punches dị ka ị na-agbalị nọrọ ndụ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
4. Nwụrụ Anwụ ịkpalite 2 - Nke a bụ onye mbụ shooter egwuregwu ebe ị ga-egbu zombies na dị n'ebe niile, chebe onwe gị si ha na-agbalị ịghara okokụre anya site undead, na nza nke ọzọ n'ihi na ị na-eme. E nwere niile n'ụzọ nke ngwá agha ka i jiri na onye ọ bụla onye na-eme ihe ọbara na-egbu karịa ọzọ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
5. mgbe ebighị ebi Warriors 3 - Players achọ ọtụtụ awa nke fun ga-n'anya egwuregwu a. Nke a fantasy ụwa nke Undar bụ ihe The Epic egwuregwu ga-ewe gị na njem ebe ị ga-eme agha na ndị ọzọ egwuregwu. Ị ga na-eme ihe ike ike na gị na-aghọ nkọ ga-mkpa ịdị ngwa, gị adrenaline ga-enyere gị na egwuregwu a nke agha, ma ị ga-mkpa nna nkà nke na-agba ọsọ na-awakpo niile n'otu oge ma ọ bụrụ na ị chọrọ imeri iro gị . Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
6. Real Racing 3 - Nke a egwuregwu ga-enye gị a mmiri ahụmahụ na bụ ihe ezi uche na magburu onwe ndịna. Ị ga-enwe ụgbọala n'elu 50 ikikere ụgbọala na na 1000 ihe bụrụ na ọ bụghị ihe ndị ọzọ. Mpi na ndị ala ọzọ ma ọ bụ ọbụna ndị enyi gị, ma ọ bụrụ na ha na-agaghị ejikọrọ ị ka nwere ike mpi na bụla n'ime ha. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
7. Nwụrụ Anwụ Mmetụta - Ị na gamer na-etinye na a ohere ụgbọ mmiri ahụ nke nwere zombie otiti n'ụgbọ ya, ị ga-adị ndụ a otiti na-ahụ ndị na-akpata ọrịa. Egwuregwu a nwere nza nke egbe na quests n'ihi na ị na wuchaa, ma ọ bụrụ na ị na-amasị ihe ịma aka na ike ọkụ mgbe ahụ egwuregwu a bụ maka gị. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
8. Frontline Commando 2 - Ị ga mkpa egosi niile nkà gị na izi ezi na egwuregwu a. Ị ga-abụ akụkụ nke a ọbara mepere emepe agha jupụtara na nza nke na-awụfu ọbara dị ka ị na-alụ ọgụ n'ezie na mebere ndị iro nwekwara ngwá agha na-na-ebibi ihe na-amasị na ị nwere ha na ha mkpofu. E nwere ruo 40 ọzọ n'ihi na ị na mezue na pụrụ iche 13 na ihe ịma aka ebe ị ga-mkpa ibibi ndị iro gị. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
9. SHADOWGUN: DeadZone - Nke a egwuregwu jupụtara edinam, magburu onwe ndịna-emeputa na a ọtụtụ mode. Ị nwere ike ịhọrọ n'etiti 4 dị iche iche na-agụ akụkọ, dị ka ị na-aga na njem n'ime ndapụta na-futuristic na-emegide ga-egbu gị ma ọ bụrụ na ị na-adịghị egbu ha mbụ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
10.-apụghị ibibi ebibi - Chọta onwe gị n'azụ wheel nke a ụgbọala nke a kwadebere maka agha. -Achọpụta onye nwere mma agha dị ka ị na-eme agha na ndị ọzọ egwuregwu. Egwuregwu a na-enyere gị ibuso ya agha na ọtụtụ mode na anọ Player ma ọ bụ megide kọmputa, na a kpọọ ọkọlọtọ, akụ ma ọ bụ ọbụna a deathmatch collection. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
Nke a website nwere APK downloads nke n'elu Android egwuregwu ke 2015.
1. Teen Patti Android cha cha Game - Nke a kaadị egwuregwu bụ ihe niile banyere akpọ kaadị online. Ị nwere ike igwu egwu na elu ise Player na unu nile na-egwu Teen Patti Indian Poker. Ihe egwuregwu a bụ na-egwu atọ kaadị egwuregwu niile ozugbo na otu tebụl. Ị nwere ike-egwu egwuregwu a na ndị enyi gị ma ọ bụ ndụ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
2. nchọgharị ụzọ ụgbọ oloko Arcade Game - ụzọ ụgbọ oloko surfers dị ewu Arcade egwuregwu. Na egwuregwu a ị ga-Dodge okporo ígwè ndị; anakọta omimi igbe, ego na agwa tokens. Ị pụrụ ọbụna na-agbalị iti enyi gị Akara ọ bụrụ na ị amaja. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
3. Fast Racing 3D - Nke a racing edinam egwuregwu nwere elu ikwesị ntụkwasị obi na pụtara ndịna. Ị ga na-anakọta gbasie ike na akụ aka ọzọ racers anya n'okporo ụzọ. Egwuregwu a nwere ihe niile ị chọrọ ọ na e dere ịtụnanya ụgbọala na pụtara tracks. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
4. Traffic Racer - Nke a bụ adịghị agwụ agwụ racing egwuregwu, ebe i nwere ike ụgbọala site ọnọdụ nke bụ ihe ọhụrụ na na ụgbọala nke bụ ihe ọhụrụ na okporo ụzọ na okporo ụzọ. Ị ghaghị izere ihe mgbochi na-n'etiti ụzọ, na ngwa ngwa ị na ụgbọala ndị ofụri egwuregwu ndị ọzọ awards na mkpụrụ ego ị ga-arụ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
5. Temple Run 2 - Nke a egwuregwu dabeere n'elu echiche na ị nwere na ihe nketa gị arụsị na e zuru ohi a temple nke bụ oge ochie. Nke a kpasuru ha iwe a enwe ogologo anụ bụ onye dị obi ọjọọ na ọ chọrọ ka ndị arụsị azụ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
6. Super Bit Dash - The ọrụ taps ihuenyo ka awụlikwa elu na-swiping ga-emekwa ọkpụkpọ ime dị iche iche na omume. The nnọkọ nke dashes eji na-ejupụta elu site na achịkọta mkpụrụ ego. Ma ịkpachara anya na akpachapụghị anya etikwasị pụrụ iduga gị ga-ekpe a na-egbu egbu ụzọ kpamkpam elu na akọrọ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
7. Banana Kong - Nke a na-agba ịnyịnya na-jupụtara na-akpali akpali edinam na nwere ịtụnanya ndịna-emeputa na ị ga-ahụ na e nwere ọtụtụ twists ka egwuregwu. Ị bụ Banana Kong na dị ka ị siwing ofụri ikuku na ị nwere na-anakọta ego. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
8. Temple Castle Run 2 - Ị ga-inyocha na nnukwu ụlọ nke bụ omimi na-enwe na-amaghị ize ndụ. Chọta furu efu temple nnukwu ụlọ na-enwe ikike ndị na-arụsi ọrụ ike na iso nke kpara dragons na ndị dị ike na-agba ụta. Na mkpụrụ ego egwuregwu mkpa na-anakọtara otú i nwere ike mepụta elu akara. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
9. The Unicorn Dash - Ị ịchịkwa Unicorn n'ime oké ọhịa, na ọ bụ na nke a oké ọhịa na ị ga-etipịa ndị amethyst na elves nke ga-eme ka ndị ọzọ ihe. Ndinuak na crystal ga-irite gị ọzọ ihe. Ị nwere ike dịkwuo isi ihe ndị a site ndinuak dị ukwuu amethyst ka i nwere ike. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
10. Gunship Agha: Helicopter 3D - egwuregwu a nwere a 3D mmetụta na ike ọgụ helicopters ịhọrọ site na. Nke a edinam egwuregwu ka ị na-efe efe helicopters na dị ka onye na-anya ị ga-akwụsị na-emenye ụjọ na-ebelata agha na ọtụtụ dị iche iche nkuku nke ụwa. Egwuregwu a nwere na-alụ ọgụ akara ịme anwansị na agha ahụ bụ oge a. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
Nke a website nwere n'elu free APK Android egwuregwu ị nwere ike ibudata.
1. Anyị Heroes: A Mụrụ Lụọ - Ị ga-aghọrọkwa irè ọhịa na ịrịba nsọ ọ bụla ya na negatives na positives. Ị ga-ike a ike squad nke mgbe ochie na-aga ma na-achọta ụfọdụ scanning maka ahụmahụ a na eluigwe na ala. Ndokwa nke ịlụ ọgụ bụ na-akparaghị ókè na ị ga-eche ihu ufiop nlegide na dị iche iche e kere eke. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
2. Fero Agha - Ị ga-ike na-ekpo ọkụ desert a na-ekpo ọkụ n'ógbè. Enweta gị chọrọ akụ ma wulite ebe ndị mepere emepe na-emekwa ka onye bu ihe agha ike na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu. Aghọ ihe dịkwa akọ achị achị na a n'ozuzu. Iru gị ngalaba na mpaghara, eme ọhụrụ mines ma wuo obodo. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
3. Ịnyịnya Racing Ịme anwansị 3D - Na-a akụkụ nke agbụrụ na colossal hippodrome. Gbaa ịnyịnya gị stallion na agbụrụ gị rivals ná mgbalị na-ngwa ngwa karịa ndị ọzọ. Gbaa ịnyịnya gị steed na-emeri, merie, merie. Gbalịa ime ka gị rivals ka gburugburu nke ọ bụla n'ime agbụrụ nke mere na i nwere ike imeri n'ọsọ ahụ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
4. Top 12: nna ukwu nke Football - Mepụta gị onwe gị football osisi na-ewere ya n'ụzọ nile n'elu. Mmeri iche iche asọmpi na-aghọ onye nchịkwa na otu ọkachamara na gị football ụlọ ọgbakọ. Ahọrọ dị iche iche Player na dị iche iche aptitudes na àgwà na-enweta ha na-ekweta na a nkwekọrịta na gị. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
5. dragọn striker - Na nke a karịrị mmadụ ụwa na-agbalị na-achọpụta na 7 nnukwu anụ. E nwere ọtụtụ ọzọ na-akpali akpali na e nwekwara enyi na-ekwesị ntụkwasị obi ga-enyere gị aka na-alụ ọgụ. Gaa na ihe njem na-ahụ kwa akụkụ nke a mara mma dreamland na ndị niile dị iche iche ebe ọ nwere na-enye. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
6. Ọjọọ Genius Online - Mepụta a omimi isi na-eme ka ọnụ otu nnukwu ike nke ngwá ọgụ ma na-ekwesị ntụkwasị obi flunkies. Jiri gị dị ike àgwà na ikike imeri eluigwe na ala. Mepụta a omimi den na ịgbatị ya, ike sayensị labs, dị iche iche itieutom na ụlọikwuu nke na a virtuoso nwere ike ime. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
7. Duck Ịchụ nta 3D - Ị na-n'usọ a ọdọ otú ị mkpa ịchọta onwe gị a ezigbo ọnọdụ otú i nwere ike na-agbali gbaa dị ka ọtụtụ ducks dị ka o kwere a ụfọdụ ego nke oge. Gị égbè nkà ule na-ahụ ma ọ bụrụ na gị na-aghọ nkọ na égbè ikike bụ ezi ihe ọ bụla dị ka ị na-agbali ka a ndekọ. Ma, kpachara anya; ducks ike ofufe elu n'ebe ọ bụla. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
8. dike Nka Z - Gaa site a ngwakọta nke ọrụ ma na-eme agha na ọtụtụ dị iche iche iro. Mee otu ìgwè nke akụkọ na-emeghị nke ahụ ga-à gụpụrụ dị ka ị na-achọpụta otú dị iche iche onye ọ bụla n'ime ha bụ, dị ka ị kwadebe maka ahụmahụ na-na-meekwa ka ị na-anwa anwa n'ime a omimi eluigwe na ala. Were gị akụkọ site woodlands, mkpụrụ ndụ, dị iche iche ebe na-atọgbọ. Laa ọ bụla e kere eke na-eche gị n'ụzọ na-aga. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
9. Car Racing Simulator 2015 - Win agbụrụ site agbahapụ gị mmegide. Ụgbọala na a ọsọ na bụ ibu ngwa ngwa dị ka ị na-agbalị aka gị na-eweta nsogbu ọmụmụ, ime nkọ atụgharịa ihe niile ị pụrụ ime iji zere na-akwọ ụgbọala na n'akụkụ ụzọ. Ụgbọala gị ụgbọala na winding ụzọ, zere mkpọka na gị rivals ugbo ala na-emeri dị ka ọtụtụ agbụrụ ha ka i nwere ike, otú ị ga-esi-enweta ụgwọ ọrụ. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
10. Otu Ibe: Run Chopper Run! - Chopper bụ onye a ma ama akụkọ site na Anime otu. Eduzi Chopper site ọtụtụ etoju na na-eweta nsogbu, dị ka ị akpọkọta ụgwọ ọrụ na njem. Nke a reindeer bụ dike nke egwuregwu, otú nyere ya aka ka ọ na-Ventures ka akụkụ nke ọ bụla n'agwaetiti nke na-agbasasịkwa gafee oké osimiri. Ịhụ egwuregwu a na ebe a.
> Resource> emulator> Android Games APK-Olee otú Download Free Android Games na Full Version